Klopp oo shaaca ka qaaday sababta ugu weyn ee ka dambeysay guulihii uu la gaaray Liverpool – Gool FM
Klopp oo shaaca ka qaaday sababta ugu weyn ee ka dambeysay guulihii uu la gaaray Liverpool
(Liverpool) 20 Sebt 2019. Macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa la wareegay shaqada tababarka ee kooxda Liverpool bishii Oktoobar ee sanadkii 2015-kii, isagoo badalay Brendan Rodgers, balse wuxuuna ku guuldareystay inuu saameyn deg-deg ah ku yeesho natiijooyinka kooxda.
Guushii ugu weyneed ay gaartay kooxda Liverpool sannadkiisa koowaad ee tababare Klopp ayaa waxay aheyd inay gaartay finalka tartanka UEFA Europa League, waxayna xilligaas calaamad u aheyd horumar gaar ah ay sameysay Reds, marka lagu daro inay la saxiixatay xiddigaha Sadio Mané, Wijnaldum iyo Joël Matip sannadkii labaad.
Liverpool ayaa gaartay sidoo kale finalka tartanka xiisaha badan ee Champions League xilli ciyaareedkii 2017/2018 ka hor inta aysan guuldarro ka soo gaarin Real Madrid, laakiin waxay ugu dambyntii ku guuleysteen xilli ciyareedkii hore ee 2018/2019, kaddib markii ay garaaceen kulankii finalka ahaa kooxda Tottenham.
Haddaba macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Liverpool Echo” wuxuu ku sheegay:
“Kubadda cagta waxaa jira labo qaab oo loo horumariyo, qaabka koowaad waa in aan la soo saxiixano ciyaartooy wanaagsan, tan labaadna waa tababarada la sameynayo, laakiin hadaad isku darsato labadaas marwalba waa arrin fiican, waxaana ku guuleysanay inaan halkaas gaarno taasna runtii way fiicneyd”.
“Inaad yeelato aasaasi iyo aqoonsi aad ugu ciyaarto kooxda waa wax weyn, laakiin waxaad sidoo kale u baahan tahay ciyaartoy heer caalami ah”.
“Waxaan u malaynayaa inay arrintan tahay waxaan isku daynay inaan sameysano waana ku guuleysanay, dhamaan wiilasha kooxda waxbadan ayey horumar sameeyeen tan iyo imaatinkoodii”.
“Way adkeyd in qaabkan loo adeegsado horyaalka ugu adag ee Premier League, laakiin si uun bay u dhacday”.
Unai Emery oo si weyn ugu amaanay labo ka mid ah xiddigahiisa guushii ay xalay ka gaareen Frankfurt
Tababare Solskjær oo ka hadlay go’aankii uu kooxda kaga diray xiddigaha Lukaku iyo Sanchez